အလှအပကြိုက်လွန်းတဲ့သခင်ကြောင့် ပုံစံပြောင်းသွားခဲ့ရတဲ့ ခွေးလေး
October 11, 2021 sonsonlinlin 0
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကယ်လီဖိုးနီယားပြည်နယ်မှ Maritsa Rubalkava အမည်ရှိ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးဟာ သူမရဲ့ ၅ နှစ်အရွယ် Chihuahua ‘Coco’ အတွက် လက်သည်းအတုများကို တစ်ရက်လျှင် မိနစ် ၄၀ ကျော် သုံးစွဲခဲ့ပါတယ် ။ ထိုဗီဒီယိုများက အလွန်လူကြိုက်များပြီး ကြည့်ရှုသူသန်းပေါင်းများစွာ ရှိခဲ့ပါတယ် ။ Maritsa က သူမပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လက်သည်းအတုများဟာ ပြပွဲအတွက်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပြီး သူမက သူမရဲ့ […]
လူ႔ဘဝအေႂကြးကို ႏြားဘဝနဲ႔ လာဆပ္ရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ရပ္မွန္
မိုးဦးကျရာသီ၏ တစ်ခုသော နံနက်အစောတွင်ဖြစ်သည်။မလှလူသည် ရွာဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းက အုန်းမောင်းခေါက်သံ ကြားသည်နှင့် အိပ်ရာမှ ထခဲ့သည်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုသာလှ ယာတောမသွားမီ ထမင်း ထုပ်ပေးရန် မီးဖိုချောင်ဝင်၍ ချက်ပြုတ်နေစဉ် လှလူရေ ဟေ့… လှလူ၊ ခွေးကြည့်ပါဦး။ ခြံတံခါးဆီက ခေါ်သံကြား၍ မလှလူ မီးဖိုချောင်ထဲမှ ထွက်လာခဲ့သည် ။ ဟဲ့… စောစောစီးစီး ဘယ်သူများလဲလို့ အေးဘုံကိုး ။ ဘာအရေးကြီးကိစ္စ ရှိလို့တုန်း။ ဒီမနက် နှမ်းကြဲချင်လို့ နှမ်းနှစ်ပြည်လောက် […]
ေမပန္းခ်ီနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီ ေဘဘီေမာင္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ထပ္ေျပာၿပီ
မေပန်းချီနဲ့ ပတ်သက်ပြီ ဘေဘီမောင် တစ်ကျော့ပြန် ထပ်ပြောပြီ #MayPanche #BabyMaung #မေပန်းချီ #ဘေဘီမောင် မေပန်းချီနဲ့ ပတ်သက်ပြီ ဘေဘီမောင် တစ်ကျော့ပြန် ထပ်ပြောပြီ #MayPanche #BabyMaung #မေပန်းချီ #ဘေဘီမောင် မေပန်းချီနဲ့ ပတ်သက်ပြီ ဘေဘီမောင် တစ်ကျော့ပြန် ထပ်ပြောပြီ #MayPanche #BabyMaung #မေပန်းချီ #ဘေဘီမောင် မေပန်းချီနဲ့ ပတ်သက်ပြီ ဘေဘီမောင် တစ်ကျော့ပြန် ထပ်ပြောပြီ #MayPanche #BabyMaung #မေပန်းချီ […]
ချိုင်းအောက်နဲ့ နောက်ကျောမှာအဆီတွေစုနေလို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်နည်း
အဝလွန်တာဟာ အလှအပတစ်ခုတည်းအတွက် မကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းမကောင်းပါဘူး။ ချိုင်းအောက်နဲ့ နောက်ကျောမှာအဆီတွေစုနေလို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်နည်းကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ အေရိုးပစ်ကစားတာ ပြေးတာတွေဟာ အဆီတွေကျစေသလို ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းကောင်းပါတယ်။ နောက်ကျောကအဆီတွေဆိုတာဘာလဲ နောက်ကျောကအဆီတွေစုနေတာကိုလျစ်လျူရှုထားလို့မရနိုင်ပါဘူး။ ဘရာဇီယာဝတ်ရာမှာလည်း အဆင်မပြေသလို အင်္ကျီပွပွဝတ်ဝတ် ကျပ်ကျပ်ဝတ်ဝတ် ရုပ်ဆိုးစေပါတယ်။ ၁။ အရင်ဆုံး ကိုယ်ကိုကိုင်းထားပါ။ ၂ ပေါင်ကနေ ၃ ပေါင်ထိလေးတဲ့ အလေးတုံးအသေးနှစ်ခုကို မထားပါ။ ပြီးရင်လက်နှစ်ဖက်ကို ကားလိုက် စုလိုက်လုပ်ပေးပါ။ ၁၅ ကြိမ် မနားတမ်းလုပ်ပေးပါ။ ၂။ […]
နှစ် ၁၀၀၀ သက်တမ်းရှိလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်အတွင်းမှာ မပျက်မစီးသေးတဲ့ အရိုးစုတစ်ခုကို တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ သုတေသီများ
နယ်သာလန်ရှိ သိပ္ပံပညာရှင်များက ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ဟောင်းတစ်ဆူကို မထင်မှတ်ဘဲထိတ်လန့်ဖွယ်တွေ့ရှိမှုတစ်ခု ပြသလာခဲ့ပါတယ် ။ ထို့နောက် ချက်ချင်းပင် ထိုတွေ့ရှိမှုက ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ သိပ္ပံပညာရှင်များနဲ့ လူထုကို အလွန်အံ့သြစေခဲ့ပြီး ထိုအရာက အလွန်တရာမှ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောကြောင့် ရှင်းပြချက်ကိုအတည်မပြုနိုင်ပါ ။ အထူးသဖြင့် သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက် Infoniac.Ru (Russia) အရ ဒီရှေးဟောင်းရုပ်တုကို မူလက Assen (နယ်သာလန်) မြို့ Drent သမိုင်းပြတိုက်မှာ တည်ရှိပါတယ် ။ ၎င်းကို ဘူဒါပက်စ် (ဟန်ဂေရီ) […]
တင္းတိပ္ကို ေပ်ာက္ေစေသာ လြယ္ကူတဲ့ သဘာဝနည္းေလးေတြပါ
တင်းတိပ်ကို ပျောက်စေသော လွယ်ကူတဲ့ သဘာဝနည်းလေးတွေပါ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မျက်နှာပေါ်မှာ တင်းတိပ်ဖြစ်၍ စိတ်ညစ်နေလျှင် အောက်ပါ သဘာဝဆေးနည်းများဖြင့် ကိုယ်တိုင်ကုသနိုင်ကြပါတယ်။ (၁) ဒန္တသုခဆေးပင် အရွက်စိမ်းကို ကြိတ်၍ သနပ်ခါးနှင့်ရောစပ်ကာ ညအိမ်ယာဝင်ခါနီးတိုင်း တင်းတိပ်ပေါ်ကို လိမ်းပေးပါ။ စိတ်ရှည်စွာဖြင့် တစ်လခန့် လိမ်ပေးပါက တင်းတိပ်လုံးဝ ပျောက်ပါမည်။ (၂) ကွမ်းရွက်ကို ၃ ရွက်ခန့်ကို ပါးပါးလှီး၍ ရေ ၃ ခွက် ၁ ခွက်ဖြစ်အောင်ပြုတ်ကာ ၎င်းကွမ်းပြုတ်ရည်ကို […]
တစ်နေ့( ၇ )ခေါက်ပုံမှန်ရွတ်ရုံနဲ့ ထူးခြားပါလိမ့်မယ်
တစ်နေ့( ၇ )ခေါက်ပုံမှန်ရွတ်ရုံနဲ့ ထူးခြားပါလိမ့်မယ်။ သိကြားမင်း ဂါထာတော်_ဝေဒါသာကု ၊ ကုသာဒါဝေ ဒါယသာတ ၊ တသာယဒါ၊ သာသာဓိကု ၊ ကုဓိသာသာ ကုတကုဘု ၊ဘုကုတကု ဝေ = ငါ၏ရန်သူဟူသမျှတို့သည် ဒါ = ဝေးစွာသော အရပ်သို့သာ = လျင်စွာ ကု = ပြေးကုန်သတည် ကု = ငါ့အားမကောင်းသဖြင့် ကြံကုန်သောသူတို့သည် သာ = မိမိအလိုလို […]
စမူဆာ ျဖစ္ေပၚလာပုံ သမိုင္းေၾကာင္း
(စမူဆာ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ) ဘုရင် သတိုးမင်းဖျားက ငတက်ပြားကို ဖမ်းမဟဲ့လို့ ထွက်ခွာခဲ့တာ တစ်ရက်လောက်နဲ့မိမယ် ထင်ထားတာ မမိဘူး။ထင်တာ ထက်ကြာနေခဲ့တယ် ရိက္ခာကလည်း အများကြီး ယူမလာမိဘူး ဆိုတော့ ဂျုံမုန့် အနည်းငယ်ပဲ ကျန်တော့တယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ နီးရာမှာ လိုက်ရှာတော့တောင်ယာတဲတစ်ခုမှာ ဂေါ်ဖီကြက်သွန်နဲ့ ဟင်းသီး ဟင်းရွက် အချို့ကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ မင်းကြီးလည်း ဘာလုပ်စားရကောင်းမလဲ စဉ်းစားတုန်း သူနဲ့အတူလိုက်ပါလာတဲ့ မိဖုရား စောဥမ္မာ အောက်စလွတ်တာကို မြင်လိုက်ရတာကြောင့် […]
နိုင်ငံခြားသူလေးကို လက်ထပ်ယူခဲ့ပြီး ချစ်လွန်းလို့ အိမ်လိုက်နေခဲ့ရာမှ ကွာရှင်းကာ မောင်းထုတ်ခံလိုက်ရသောကြောင့် သွားစရာမရှိဘဲ လမ်းဘေးတွင် နေထိုင်နေရသည့် အမျိုးသား
နိုင်ငံခြားသူလေးကို လက်ထပ်ယူခဲ့ပြီး ချစ်လွန်းလို့ အိမ်လိုက်နေခဲ့ရာမှ ကွာရှင်းကာ မောင်းထုတ်ခံလိုက်ရသောကြောင့် သွားစရာမရှိဘဲ လမ်းဘေးတွင် နေထိုင်နေရသည့် အမျိုးသား ဖူးစားဆိုသော အရာတစ်ခုကြောင့်ပင် လူသားအချို့ဟာ ရေခြားမြေခြား ဝေးကွာလှသော ဒေသမှ ချစ်သူများနှင့်ဆုံတွေ့တတ်ကြပါတယ်။ အချစ်၏ဆန်းကြယ်မှုတွေနှင့်အတူ ယဥ်ကျေးမှုမတူညီလှ သော် လက်ထပ်ကာ ဘဝတစ်ခုကို တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တာဟာ စစ်မှန်တဲ့ အချစ်ကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ပင် ဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံမှ အမျိုးသားတစ်ဦးဟာလည်း ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ ကောင်မလေးတစ်ဦးနှင့် ဆုံတွေ့ကာ လက်ထပ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက်တွင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင်ဇနီးနှင့်အတူလိုက်လံနေထိုင်ခဲ့သော်လည်း အခြေအနေတစ်ခုကြောင့် […]
မနေ့ည၈နာရီကျော်ကျော်ဆလောက်ကကျနော်လက်ဖက်ရည်သောက်ဖို့သောက်နေကျဆိုင်ထဲကိုဝင်လိုက်တယ်….. ထိုင်ခုံကမရှိတော့ကိုရင်လေးထိုငိနေတဲ့စားပွဲမှာပဲဝင်ထိုင်လိုက်တယ်စားပွဲထိုးကောင်မလေးကကျနော့်အတွက်…. လက်ဖက်ရည်ခွက်ချပေးနေတုန်းကိုရင်လေးကမေးလိုက်တယ်…. ဒကာမလေးးကိုရင်မှာထားတာကြာပီလေမရသေးဘူးးလားတဲ့….. ကျနော်လည်းးမနေနိုင်မထိုင်နိုင်မေးလိုက်မိတယ်….ကိုရင်ကဘာမှာထားတာလဲလို့….. ချိုစိမ့်နဲ့ပဲနံပြားမှာထားတာ…..အဲဒါနဲ့ကျနော်လည်းးပြန်မေးလိုက်တယ်…..ကိုရင်ကဒီအချိန်စားလို့မရဘူးလေဆိုတော့….မဟုတ်ဘူးးအမေ့အတွက်တဲ့….. လက်ဖက်ရည်ခွက်ချပေးနေတုန်းကိုရင်လေးကမေးလိုက်တယ်…. ဒကာမလေးးကိုရင်မှာထားတာကြာပီလေမရသေးဘူးးလားတဲ့…..ကျနော်လည်းးမနေနိုင်မထိုင်နိုင်မေးလိုက်မိတယ်…. ကိုရင်ကဘာမှာထားတာလဲလို့…..ချိုစိမ့်နဲ့ပဲနံပြားမှာထားတာ….. အဲဒါနဲ့ကျနော်လည်းးပြန်မေးလိုက်တယ်…..ကိုရင်ကဒီအချိန်စားလို့မရဘူးလေဆိုတော့…. မဟုတ်ဘူးးအမေ့အတွက်တဲ့…..မြို့ရှောင်လမ်းထဲရောက်တော့ဘယ်ဘက်ကိုချိုးဝင်ခိုင်းတယ်ပြီးတော့ သင်္ချိုင်းကုန်းထဲဝင်ခိုင်းတယ်ဗျာ….ကျနော်တော်တော်လန့်သွားတယ်ညက၈နာရီကျော်ပီလေ….. သင်္ချီုင်းကုန်းဆိုတာတိတ်ဆိတ်နေတာကြက်သီးတွေတဖြန်းဖြန်းထလာတယ် ဒါပေမယ့်ကျနော်ကြောက်စိတ်ကိုဖယ်ပြီးတော့သင်္ကန်းခြုံထားတဲ့ကိုရင်လည်းပါတယ်ဆိုပီးအားတင်းဝင်လိုက်တယ်….. အဲဒီမှာကိုရင်ကဆင်းပီးဓါတ်မီးလေးနဲ့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်ပြီး…..အုပ်ဂူလေးးတစ်လုံးပေါ်တက်ထိုင်ပြီး…… အမေအမေကြိုက်တဲ့ချိုစိမ့်ရယ်ပဲနံပြားရယ်….သားလာပို့တာပါသားကိုခွင့်လွှတ်ပါအမေရယ်တဲအမေမသေခင်တုန်းကမပြုစုခဲ့ရတာတွေ…. သားအခုမှယူကြုံးမရဖြစ်နေပြီအမေရယ်တဲ့အဲလိုတွေပြောပြီးတော့ကိုရင့်ကအဲ့ဒါကိုရင့်အမေရဲ့အုပ်ဂူလေးပဲတဲ့….. မသေခင်တုန်းကလုပ်မကျွေးနိုင်ခဲ့လို့အခုလာပို့တာပါလို့သူပြောတဲ့စကားနားထောင်းရင်း…. ကျနော်သူ့ကျောင်းထိပြန်လိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်….ကျနော်သံဝေဂတစ်ခုရလိုက်တယ်….. သူတောင်သေသွားတဲ့မိခင်ကိုသင်္ချီုင်းကုန်ထိလိုက်ကျွေးနေသေးတာ…. ငါတို့ကအခုအသက်ရှိနေတဲ့မိခင်ကိုပိုတောင်ဂရုတစိုက်ကျွေးသင့်တယ်ဆိုတဲ့အသိတရားရလိုက်ပီလေ….. ကိုယ့်ကိုမွေးပေးတဲ့မိခင်ဆိုတာတစ်သက်လုံးတစ်ယောက်ပဲရှိတာမို့…. အစားထိုးးမရတဲ့အနန္ဒဂိုဏ်းဝင်ကျေးဇူးရှင်ကိုအသက်ရှင်နေတုန်း….. လုပ်ကျွေးသမှုပြုကြရင်းနဲ့ကျေးဇူးးဆပ်ကြရအောင်သူငယ်ချင်းတို့ရေအခုတော့….. ကျနော်ရယ်ကိုရင်ရယ်သင်္ချိုင်းကငြိမ်သက်နေတဲ့အုပ်ဂူလေးးရယ်……။Credit:တောင်ပံနီလူလေး Zawgyi မေန႔ည၈နာရီေက်ာ္ေက်ာ္ဆေလာက္ကက်ေနာ္လက္ဖက္ရည္ေသာက္ဖို႔ေသာက္ေနက်ဆိုင္ထဲကိုဝင္လိုက္တယ္….. ထိုင္ခုံကမရွိေတာ့ကိုရင္ေလးထိုငိေနတဲ့စားပြဲမွာပဲဝင္ထိုင္လိုက္တယ္စားပြဲထိုးေကာင္မေလးကက်ေနာ့္အတြက္…. လက္ဖက္ရည္ခြက္ခ်ေပးေနတုန္းကိုရင္ေလးကေမးလိုက္တယ္…. ဒကာမေလးးကိုရင္မွာထားတာၾကာပီေလမရေသးဘူးးလားတဲ့….. က်ေနာ္လည္းးမေနႏိုင္မထိုင္ႏိုင္ေမးလိုက္မိတယ္….ကိုရင္ကဘာမွာထားတာလဲလို႔….. ခ်ိဳစိမ့္နဲ႔ပဲနံျပားမွာထားတာ…..အဲဒါနဲ႔က်ေနာ္လည္းးျပန္ေမးလိုက္တယ္…..ကိုရင္ကဒီအခ်ိန္စားလို႔မရဘူးေလဆိုေတာ့….မဟုတ္ဘူးးအေမ့အတြက္တဲ့….. လက္ဖက္ရည္ခြက္ခ်ေပးေနတုန္းကိုရင္ေလးကေမးလိုက္တယ္…. ဒကာမေလးးကိုရင္မွာထားတာၾကာပီေလမရေသးဘူးးလားတဲ့…..က်ေနာ္လည္းးမေနႏိုင္မထိုင္ႏိုင္ေမးလိုက္မိတယ္…. ကိုရင္ကဘာမွာထားတာလဲလို႔…..ခ်ိဳစိမ့္နဲ႔ပဲနံျပားမွာထားတာ….. […]